Dowlado Ethiopia Burburka kabadbaadinayo Soomaaliyana laraba burbur | SMC
Home WARARKA MAANTA Dowlado Ethiopia Burburka kabadbaadinayo Soomaaliyana laraba burbur
Dowlado Ethiopia Burburka kabadbaadinayo Soomaaliyana laraba burbur
Ethiopia oo kajirto xasilooni daro siyaasadeed & kacdoono qowmiyadeed waxaa garab & gaashan u noqday Dowladaha ugu tunka waweyn ee caalamka & kuwa gobolka waxaana intaas ayka dadaalayan in Ethiopia uu ku yimaado burbur qowmiyadahana ay noqdaan dowlado kala badaxbanaan.
Balse Soomaaliya si aysan dowlad dimuqraadi uga dhalan Dowladaha cadowga u ah Soomaaliya waxaay dhaqaalo xoogan ku bixiyeen doorashadii Madaxweyne Farmaajo, iyadoo ayka faaideysanayo shacabka soomaaliyeed oo u hamuun qaba shaqsi leh ifafaalo wadaniyadeed laguna aamini karo hogaamin ta dalka.
Markii uu talada lawareegay Madaxweyne Farmaajo oo ka amar qadanayo dowlada maalgaliyay wuxuu bilaabay in uu daganaantii siyaasadeed ubadalo fidno & fowdo iyadoo qodobkii ugu muhiimsana ay shacabka soomaaliyeed hishiiska ku ahayeen uu laalay kaaso ah in 4 sano mar aydhacdo doorasho laisla ogolyahay .
qaska & jahwareerka siyaasadeed uu dalka ku haayo Madaxweyne Farmaajo waxaa gadaal ka riixayo dowlado kasoo horjeeda in Soomaaliya xasilooni & hormar ka dhacdo waxaana hormuud u ah dowladahaas QATAR.
Shacabka Soomaaliyeed marnaba isma waydiinayaan Ethiopia oo qarka usaaran ineey burburto waxaa badbaadinayo &, Shacabka Soomaaliyeed oo kasoo daalay colaad & jawhareer siyaasadeed in maanta siyaasiin hub isugu qaadato iyadoo la heli karo in sanduuqa lagu kala baxo waxaa kalifay.
Hadii Madaxweyne Farmaajo talada dowladaha cadowga qaato oo ah in aan la qaban doorasho 2020 / 2021 shacabka soomaaliyeed ay fahmi wayaan dhagartaas & boor isku qarinta Madaxweynaha yaa umaqan dalkaan & dadkaan .
W/Q Amaal Cadaan
Previous articleMursal oo wada qorshe uu ku fashilanayo rabitaanka doorasho ee M/goboleedyada
Next articleDowlada Federaalka oo xayiraada ka qaadeysa Jubbaland iyo Axmed Madoobe oo Shuruudo